Dacwadii shalay ee Malmö - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Drago Prvulovic/Scanpix.
Dacwadii shalay ee Malmö
La daabacay tisdag 8 maj 2012 kl 10.43
Maalintii shalay ahayd ayaa maxkamad la horkeenay ninkii loo tuhunsanyey in u magaalada Malmö ka fuliyey weeraro badan, dil iyo dhaawacna loo haysto balse maxaa ka soo baxay shalay...?
Ninkan oo magaciisa la yidhaa Peter Mangs ayaa loo haystaa saddex dil iyo laba iyo toban isku day dil intii u dhaxaysay sannadkii 2003 ilaa 2010.
Dad badan ayaa ku raja qaba hadda in arrintan ninkan meel lagu tiiriyo balse shakhsiyan Peter Mangs wuu dafiray dhamaan dambiyadaas lagu soo oogay ee loo haysto.
Baadhitaanada iyo waraysiyada bileysku la yeesheen ninkan ayaa buuxiyey waraaqo dhan 7500 oo xaashiyood.
Börje Sjöholm oo ka tirsan bileyska magaalada Malmö kana tirsan madaxda baadhitaanka Peter gacanta ku haysa ayaa sheegay:
- Peter Mangs waxa maskaxdiisa aad wax ugu reebay dhimashadii walaashi, lamana oga ilaa hadda inta u arinkaasi ka qaadan doona dacwadiisa.
Peter Mangs ayaa sheegay in aanu ka tirsanayn urur gaara nacaybna u haynin dadka ajahnimka ah, sheegayna in ajahanimku leeyihiin wax xun iyo wax fiicanba. Isla markaasna aanu ahayn shakhsi cunsuri ah, maadaama uu yahay shakhsi ciyaara muusikada afrikaanka oo uu sannado badan ciyaarayey, waa sida u isagu aaminsanyahaye..
Ninkan ayaa la sheegay in u qabo cudurka ( asperbers syndrom ) oo aanu u fikirayn sida dadka caadiga ahi u fikiraan, kana tirsanyahay xisbiga bidixda ee vänsterpartiet, balse u ku xidhanyahay qoraalka ay soo saaraan cunsuriyiintu.
Douglas Norking oo ah qaareenka Peter Magns ayaa sheegay in sannadkii iyo badhkii u ku jiray gacanta bileyska u nolol wacan ku noolaa, raaciyeyna in u ahaa qof firfircoon oo qoray heeso muusik iyo buug.
Peter Magns ayaa qirtay in u magaalada la dhex mushaaxi jiray hubka fudud ee gacanta lagu qaato isagoo ku labisan jaakeedkiisa gacmaha goan ee u ugu yeedho koodhkii dagaalka ( Stridväst ).
Peter Magns ayaa gabi ahaan dafiray dambiyada lagu soo oogay oo idil.
Cadaymaha lagu hayo Peter Mangs